EFOI : « Hamaly ny hetahetan’ny rehetra aho », hoy Rtoa Razakaboana Fanja | NewsMada
EFOI : « Hamaly ny hetahetan’ny rehetra aho », hoy Rtoa Razakaboana Fanja
Par Taratra sur 06/06/2016
Voafidy ho filoha nasionalin’ny vovonana Fandraharahan’ny vehivavy aty amin’ny ranomasimbe indianina eto Madagasikara (EFOI), Rtoa Razakaboana Fanja. 41 taona izy, mitantana orinasa telo ary sady filohan’ny Efoi sampana Antananarivo. Lanin’ireo mpifidy 13 tsy nisy nitsipaka izy ary mandritra ny roa taona ny fotoam-piasany. Rtoa Sylvia Pages ny filoha teo aloha nodimbiasiny.
Nambarany fa vonona hitondra avo ny fanevan’ny vehivavy mpitarika orinasa izy, mba ho lasa firenena manana vehivavy mpandraharaha hatao filamatra sy matihanina aty amin’ny ranomasimbe indianina sy aty Afrika. “Mino aho fa ho mendrika manana ny fitokisanareo, ary manantena fa afaka hamaly ny hetahetanareo”, hoy ihany izy.
Ankoatry ny fitondrana teny ny vehivavy mpandraharaha malagasy eo anivon’ny EFOI, fa hanohana sy hanampy azy ireo koa amin’ny fandraharahana sy hampiroboroboana ny sehatra isan-tsokajiny.
Mila misongadina ny EFOI
Nanome voninahitra sady niarahaba ny filoha nasionalin’ny EFOI Madagasikara vaovao koa ny kaomiseram-paritry ny EFOI, Rtoa Aline Wong. Tonga eto amintsika rahateo izy, hanohana ny lafiny teknika ireo mpikambana eto an-toerana.
Nambarany fa “ilaina mihitsy ny fidirana anaty tambajotra na fikambanana iraisam-pirenena, satria efa manodidina ny 100.000 ny ao anatin’ny fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha iraisam-pirenena, ka mila misongadina ny avy aty amin’ny ranomasimbe indianina”.